HomeTORKIACentral Anatolia26 EskisehirTao Eskişehir, namaky boky teo amin'ilay kamiao ny mpianatra ary nanome fanomezana ho an'ny olom-pirenena
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, TORKIA, tram 0
Ny mpianatra Eskisehir dia namaky ny boky teo amin'ilay kamiao nanome fanomezana ho an'ny olom-pirenena
Tao anatin'ny sehatry ny tetik'asa andraikitry ny fiaraha-monina nokarakarain'ny Eskişehir Munich Metropolitan sy ny Sekolin'i Özel ğağdaş, ny mpianatra 42 dia namaky boky tao amin'ilay tarika misy ny teny filamatra hoe 'Ny famakiana dia hetsika maoderina'. Ireo mpianatra te-hahatsapa tetik'asa toy izany mba hanomezana ny olona ny fahazarana mamaky boky amin'ny fitateram-bahoaka, dia natolony ireo boky novakiany ho an'ireo mpandeha nandeha tamin'ny kamiao niaraka tamin'ny fanamarihana napetrany tao.
Ny Kaominin'i Metropolitan, izay vao avy nanao sonia tetikasa sosialy isan-karazany miaraka amin'ny Furya Association amin'ny tramika, dia nanatontosa tetikasa hafa miaraka amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny Contemporary. N Famerenana amin'ny fomba maoderina ”ny famakiana miaraka amin'ireo tarigetra mamaky teny 42, ny taratasy voasoratra ao amin'ireo boky novakiany tamin'ny olompirenena tao anaty fiara. Ireo mpianatra, izay nanambara fa ny famakiana boky dia manazava ny faravodilanitry ny olona, ​​dia nanambara izy ireo fa te hanome ny olona ny fahazarana mamaky boky amin'ny fitateram-bahoaka miaraka amin'ity tetikasa ity.
İsmail Samur, talen'ny Soa-pampianarana momba ny siansa sy ny sekoly ambony any Anatolian dia nilaza fa mirehareha amin'ny mpianatra izy amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany. Na izany aza, ny tahan'ny famakiana boky dia ambany be eto amin'ny firenentsika. Afaka mampiasa tsara an'io fotoana io ny olona miaraka amin'ny boky hoentiny miaraka, indrindra rehefa mandeha amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa amin'ny fitateram-bahoaka. Tianay ihany koa ny hanatanteraka tetik'asa fandraisana andraikitra ara-tsosialy amin'ny fanampiana ny mpianatra ary ny hevitra avy amin'ny mpianatra. Ireo mpianatra ireo izay namaky boky teo amin'ilay tram dia nanome ny boky ho an'ny olom-pirenena hafa nandeha an-tongotra. Rehefa avy namaky ilay boky izy ireo dia nangataka azy ireo hanome izany ho an'ny olon-kafa ho fanomezana. ”
Mamaky Boky ao amin'ny İZBAN ny mpianatra 30 / 04 / 2018 Tany Aliağa, namaky boky tao İZBAN ireo mpianatra miaraka amin'ny teny filamatra hoe: "Ny olombelona mamaky teny rehetra eny için mba hisarihana ny saina sy ny fitiavana boky. Ny talen'ny fanabeazam-pirenena ao Aliağa dia nikarakara tetik'asa esi manerantany amin'ny lafiny rehetra "mba hanomezan'ny mpianatra ny fahazarana mamaky sy hampiditra ny fitiavana ny boky. Ny mpianatra sekoly ambaratonga faharoa dia namorona fanentanana tamin'ny alàlan'ny famakiana boky tao amin'ny Station İZBAN sy tamin'ny lamasinina. Ny hetsika 400 dia natrehin'ireo mpianatra. Nony maraina, ny mpianatra sy ny mpampianatra dia nankany amin'ny gara IZBAN mandra-pahatongan'ny fiaran-dalamby, ary rehefa tonga ny lamasinina dia namaky ireo boky nandritra ny dia ary nanao dia tamina ny fijanonana ho any Menemen. Mamaky boky ireo mpianatra fa tsy mandany fotoana amin'ny finday na tablety mandritra ny dia…
90 mpianatra mamaky boky amin'ny Tram 28 / 12 / 2014 Ny mpianatra mpianatra 90 dia mamaky boky amin'ny tram-barotra: ao anatin'ny sehatry ny asan'ny "Timeless and Spaceless Readings" ao amin'ny sampana Antalya an'ny Fikambanan'ny tanora ANADOLU (AGD), mpianatra 90 dia mamaky boky amin'ny fijanonana ary avy eo amin'ny fiara. 90 mpianatra mianatra amin'ny sekoly isan-karazany manerana an'i Torkia ao anatin'ny faritry ny asa vita miaraka, namaky ny teny tao amin'ny boky sy ny fiara fitateram-bahoaka tram fiatoana. Nivezivezy tamina tranomaizina tamin'ny boky ireo mpianatra, nihaona tamim-pahalianana ny olom-pirenena. Ny solontenan'ny sampana AGD Antalya Ahmet Pişirici dia nanambara fa nandamina asa iray antsoina hoe 'Lesona tsy misy dikany sy tsy ara-tsimia' izy ireo mba hampitomboana ny fahatsapana ny famakiana boky, "Mamaky vondrona ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa sy ambaratonga faharoa.
Sekoly iray ao Samsun no mamaky boky momba ny tram 19 / 01 / 2015 Sekoly iray ao Samsun dia mamaky boky amin'ny tram-barotra: Mba hanamafisana ny famakiana dia namolavola hetsika famakiam-boky amin'ny alàlan'ny tetikasa "Reading is freedom özgür" ny Ayvacık Anatolian High School. Ny Alakamisy, mpianatra 30 avy amin'ny Ayvacık Anatolian Multi-Program High School, izay miorina eo amin'ny fiaran-dalana miaraka amin'ny soratra hoe "Ny famakiana dia Free leş avy amin'ny Rail System Station, mamaky boky amin'ny fiara. Ny Ayvacık Anatolian Multi-Programme Tale School School Muhammet Ali YILDIZ sy ny mpampianatra ihany koa dia nandray anjara tamin'ilay hetsika. Ny mpianatra sy ny mpampianatra dia mitandrina tsara amin'ny famakiana mandritra ny dia handeha amin'ny kamiao maharitra mandritra ny ora 1 ary minitra 10.
Namaky boky momba ny fiaran-dalamby izy ireo mba hisarihana ny saina ho amin'ny famakiana 18 / 03 / 2015 Mba hisarihana ny saina amin'ny famakiana, namaky boky amin'ny fiaran-dalamby izy ireo: Hakkı Altop Anatolian Anatolian School in Kayseri. mpianatra, ny talen'ny Fampianarana Nasionaly momba ny Fampianarana Nasionaly nataon'ny tetikasa 'Kayseri Reads' dia namaky boky momba ny fiara. Sampan-draharaha momba ny Fampianarana Nasionaly ao Kayseri, 'Kayseri mianatra' ao anatin'ny tetikasa, nanao sonia ny hetsika hafa ny mpianatry ny sekoly ambony Altop Anatolian. Ny mpamaky 11 dia mamaky ilay boky ao anaty làlamby izay manome fitaterana ao an-tanàna mba hisarihana ny saina amin'ny famakiana. Erol Gözingi, talen'ny Hakkı Altop Anatolian High School, izay nanome fampahalalana momba ny hetsika atrehin'ireo mpianatra 11 manodidina, dia nilaza hoe: "Mianatra ny Proj i Kayseri
Navoakan'ireo olom-boafidy boky tranainy amin'ny tranokala Kayseri Book Fair 13 / 10 / 2017 14-22 dia hotontosin'ny Kayseri Metropolitan ny fiangonana amin'ny Oktobra sy Oktobra. Ho an'ny bokin'ny Kayseri Book, dia navoaka tamin'ny tranonkala ny boky. Ny ben'ny tanàna Mustafa Celik ihany koa dia nanasa ny olom-pirenena ho any amin'ny Birao Foibe amin'ny alàlan'ny fandraisana ny fiara. Nangataka fanohanana ny tanànan'i Şehir i Çelik. Talohan'ny fampirantiana ny boky Fair de Ministre de la Metropolité de Kayseri World Trade Centre, dia natao ny tranonkala. Nandritra ny alina, ireo boky sy bokikely momba ny fitantanana dia nahantona tamin'ny fiara rehetra. Hatramin'ny fiandohan'ny marainan'ny andro, ireo mpitsangatsangana dia nahita boky. Namaky boky navoaka tany amin'ny sekoliny na toeram-piasana ireo mpandeha. Book Fair mandritra ny tontolo andro ...
Mamaky Boky ao amin'ny İZBAN ny mpianatra
90 mpianatra mamaky boky amin'ny Tram
Sekoly iray ao Samsun no mamaky boky momba ny tram
Namaky boky momba ny fiaran-dalamby izy ireo mba hisarihana ny saina ho amin'ny famakiana
Navoakan'ireo olom-boafidy boky tranainy amin'ny tranokala Kayseri Book Fair
Samsun OMU manolotra boky amin'ny Tram
Fetiben'ny bokin'ny Tram
Boky fanasana amin'ny bateria
Novakiany boky momba ny tram-barotra nostalgic